कसरी वेबसाइट, इकमर्स, वा एप्लिकेसन रङ योजनाहरू विकास गर्ने Martech Zone
कसरी वेबसाइट, इकमर्स, वा एप्लिकेसन रङ योजनाहरू विकास गर्ने
बुधबार, डिसेम्बर 15, 2021 बुधबार, डिसेम्बर 15, 2021 Douglas Karr
हामीले ब्रान्डको सन्दर्भमा रंगको महत्त्वमा केही लेखहरू साझा गरेका छौं। वेबसाइट, ईकमर्स साइट, वा मोबाइल वा वेब अनुप्रयोगको लागि, यो त्यति नै महत्वपूर्ण छ। रंगहरूले प्रभाव पार्छ:
ब्रान्डको प्रारम्भिक छाप र यसको मूल्य - उदाहरणका लागि, विलासिताका सामानहरूले प्रायः कालो, रातोले उत्तेजना, इत्यादिको प्रयोग गर्छ।
खरिद निर्णयहरू - ब्रान्डको विश्वास रङ कन्ट्रास्टद्वारा निर्धारण गर्न सकिन्छ। नरम रङ योजनाहरू अधिक महिला र विश्वसनीय हुन सक्छ, कठोर विरोधाभासहरू अधिक तत्काल र छुट संचालित हुन सक्छ।
उपयोगिता र प्रयोगकर्ता अनुभव - रंगहरूमा मनोवैज्ञानिक हुन्छ र शारीरिक प्रभाव पनि, प्रयोगकर्ता इन्टरफेस नेभिगेट गर्न सजिलो वा बढी गाह्रो बनाउँदै।
रंग कति महत्त्वपूर्ण छ?
85% मानिसहरूले दावी गरे कि उनीहरूले किनेका कुराहरूमा रंगले ठूलो प्रभाव पार्छ।
रङहरूले ब्रान्ड पहिचानलाई औसत 80% बढाउँछ।
उत्पादन को स्वीकृति वा अस्वीकार को 60% को लागी रंग छाप जिम्मेवार छ।
वेबसाइटको लागि रङ योजना निर्धारण गर्दा, सँगैको इन्फोग्राफिकमा केही चरणहरू विस्तृत छन्:
प्राथमिक रंग - तपाईंको उत्पादन वा सेवाको उर्जा मिल्ने रङ छान्नुहोस्।
कार्य रंगहरू - यो तलको इन्फोग्राफिकबाट हराइरहेको छ, तर प्राथमिक कार्य रङ र दोस्रो कार्य रङ पहिचान गर्नु अत्यन्त उपयोगी छ। यसले तपाइँको दर्शकहरूलाई रङमा आधारित विशिष्ट प्रयोगकर्ता इन्टरफेस तत्वहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न शिक्षित गर्दछ।
Aअतिरिक्त रंगहरू - थप छान्नुहोस् पूरक हुने रंगहरू तपाईंको प्राथमिक रंग, आदर्श रंगहरू जसले तपाईंको प्राथमिक रंग बनाउँछ पप.
पृष्ठभूमि रंगहरू - तपाइँको वेबसाइट को पृष्ठभूमि को लागी एक रङ छनोट गर्नुहोस् - सम्भवतः तपाइँको प्राथमिक रंग भन्दा कम आक्रामक। अँध्यारो र उज्यालो मोडलाई पनि ध्यानमा राख्नुहोस्।. अधिक र अधिक साइटहरूले प्रकाश वा गाढा मोडमा रङ योजनाहरू समावेश गर्दैछन्।
टाइपफेस रङहरू - तपाईंको वेबसाइटमा हुने पाठको लागि रङ छनौट गर्नुहोस् - याद गर्नुहोस् कि ठोस कालो टाइपफेस दुर्लभ छ र सिफारिस गरिएको छैन।
उदाहरणको रूपमा, मेरो कम्पनी Highbridge एक पोशाक निर्माता को लागी एक अनलाइन ब्रान्ड विकास गर्यो जो एक प्रत्यक्ष-देखि-उपभोक्ता ईकमर्स साइट निर्माण गर्न चाहन्थे जहाँ मानिसहरूले गर्न सक्छन् अनलाइन लुगा किन्नुहोस्। हामीले हाम्रा लक्षित दर्शकहरू, ब्रान्डको मूल्य बुझ्यौं, र - किनभने ब्रान्ड मुख्यतया डिजिटल थियो तर भौतिक उत्पादन पनि थियो - हामीले प्रिन्ट (CMYK), कपडा प्यालेटहरू (Pantone), साथै राम्रोसँग काम गर्ने रंग योजनाहरूमा केन्द्रित थियौं। डिजिटल (आरजीबी र हेक्स)।
बजार अनुसन्धान संग रङ योजना परीक्षण
हाम्रो रंग योजना छनोटको लागि हाम्रो प्रक्रिया गहन थियो।
हामीले हाम्रा लक्षित दर्शकहरूसँग प्राथमिक रङहरूको श्रृंखलामा मार्केटिङ अनुसन्धान गर्यौं जसले हामीलाई एकल रङमा घटायो।
हामीले हाम्रो लक्षित दर्शकहरूसँग माध्यमिक र तृतीयक रङहरूको श्रृंखलामा मार्केटिङ अनुसन्धान गर्यौं जहाँ हामीले केही रङ योजनाहरूलाई संकुचित गर्यौं।
हामीले उत्पादन मकअपहरू (उत्पादन प्याकेजिङ्ग, घाँटी ट्यागहरू, र ह्याङ्गिङ ट्यागहरू) साथै रङ योजनाहरूका साथ ईकमर्स मकअपहरू गर्यौं र प्रतिक्रियाको लागि ग्राहक र लक्षित दर्शकहरूलाई प्रदान गर्यौं।
किनभने तिनीहरूको ब्रान्ड धेरै हदसम्म मौसमीतामा निर्भर थियो, हामीले मिक्समा मौसमी रङहरू पनि समावेश गर्यौं। यो विज्ञापन र सामाजिक मिडिया साझेदारी को लागी विशिष्ट संग्रह वा दृश्यहरु को लागी काम मा आउन सक्छ।
हामी अन्तिम योजनामा ​​बसोबास गर्नु अघि यो प्रक्रिया आधा दर्जन भन्दा बढी पटक गयौं।
जबकि ब्रान्ड रंगहरू हल्का गुलाबी र गाढा खैरो छन्, हामीले विकास गरेका छौं कार्य रंगहरू हरियो छाया हुन। हरियो एक कार्य-उन्मुख रङ हो त्यसैले यो हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूको आँखालाई कार्य-उन्मुख तत्वहरूमा तान्नको लागि उत्कृष्ट चयन थियो। हामीले हाम्रो माध्यमिक कार्यहरू (सेतो पृष्ठभूमि र पाठको साथ हरियो किनारा) को लागि हरियोको उल्टो समावेश गर्यौं। हामी होभर कार्यहरूको लागि कार्य रंगमा हरियोको गाढा छायाको पनि परीक्षण गर्दैछौं।
हामीले भर्खरै साइट सुरू गरेदेखि, हामीले हाम्रा आगन्तुकहरू आकर्षित भएका तत्वहरू अवलोकन गर्न र हामीसँग राम्रो नदेखिने रङ योजना छ भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि हामीले माउस-ट्र्याकिङ र हिटम्यापहरू समावेश गरेका छौं।
रंग, सेतो ठाउँ, र तत्व विशेषताहरु
रङ योजनाको विकास सधैं प्रयोगकर्ताहरूको अन्तरक्रिया अवलोकन गर्नको लागि समग्र प्रयोगकर्ता इन्टरफेसमा परीक्षण गरेर पूरा गर्नुपर्छ। माथिको साइटको लागि, हामीले धेरै विशिष्ट मार्जिनहरू, प्याडिङ, रूपरेखाहरू, सीमाना त्रिज्याहरू, आइकनोग्राफी, र टाइपफेसहरू पनि समावेश गरेका छौं।
हामीले कुनै पनि मार्केटिङ वा उत्पादन सामग्रीहरूको लागि आन्तरिक रूपमा वितरण गर्न कम्पनीको लागि पूर्ण ब्रान्डिङ गाइड डेलिभर गर्यौं। ब्रान्ड स्थिरता यस कम्पनीको लागि महत्वपूर्ण छ किनभने तिनीहरू नयाँ छन् र यस बिन्दुमा उद्योगमा कुनै जागरूकता छैन।
यहाँ रङ योजनाको साथ परिणाम दिने ईकमर्स साइट छ
Closet52 गृह पृष्ठ
Closet52 मा जानुहोस्
रंग उपयोगिता र रंग अन्धोपन
तपाईंको साइटका तत्वहरूमा रङ कन्ट्रास्टको लागि उपयोगिता परीक्षण नबिर्सनुहोस्। तपाईं प्रयोग गरेर आफ्नो योजना परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट पहुँच परीक्षण उपकरण। हाम्रो रङ योजनाको साथ, हामीलाई थाहा छ कि हामीसँग केही कन्ट्रास्ट समस्याहरू छन् जुन हामी सडकमा काम गर्नेछौं, वा हामीसँग हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूका लागि केही विकल्पहरू पनि हुन सक्छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, हाम्रा लक्षित दर्शकहरूसँग रंग समस्याहरूको सम्भावना एकदम कम छ।
रङ अन्धोपन भनेको गैर-रङ्ग अशक्त प्रयोगकर्ताहरूले छुट्याउन सक्ने केही रङहरू बीचको भिन्नता बुझ्न असक्षमता हो। रंग अन्धोपनले लगभग असर गर्छ पाँच देखि आठ प्रतिशत पुरुष (लगभग 10.5 मिलियन) र महिलाहरूको एक प्रतिशत भन्दा कम।
WebsiteBuilderExpert मा रहेको टोलीले यस इन्फोग्राफिक र विस्तृत सँगै लेखमा राखेको छ। तपाईको वेबसाइटको लागि रङ कसरी छनौट गर्ने त्यो अत्यन्तै गहन छ।
टैग: कार्य रंगहरूपृष्ठभूमि रंगहरूब्राण्ड रंगकार्य रंगमा कल गर्नुहोस्close52रंगरंग योजनारंग योजनाहरूecommerce रंगecommerce रंग योजनाकसरी रंग परीक्षण गर्नबजार अनुसन्धानमोबाइल एप रङ योजनाप्राथमिक रंगहरूमाध्यमिक रंगहरूरंगहरू चयन गर्नुहोस्तृतीयक रंगहरूरंग योजना परीक्षणरंग योजना परीक्षणटाइपफेस रंगहरूप्रयोगकर्ता इन्टरफेस डिजाइनवेब डिजाइनवेबसाइट डिजाइन
सेल्फी: मिनेटमा तपाईंको ईकमर्स व्यवसाय बेच्ने उत्पादनहरू वा सदस्यताहरू बनाउनुहोस्
Shopify: कसरी डायनामिक थिम शीर्षकहरू र तरल प्रयोग गरेर SEO को लागि मेटा विवरणहरू प्रोग्राम गर्ने